I-Chiefs nePirates kowokulwa neCovid19 - Ilanga News
Home Ezemidlalo I-Chiefs nePirates kowokulwa neCovid19
Banikele ngezimpahla zokuzivikela kwabasekhaleni lokulwa nalolu bhubhane
UMNU Irvin Khoza, onguSihlalo wePirates, noMnu Kaizer Motaung, ongumnikazi weChiefs, bamemezele umnikelo wala makilabhu wezimpahla zokuzivikela kwiCovid-19 kwabezempilo nakwabezokuphepha.
SEKUNGENELELE nezingqungqulu zabaphathi bamakilabhu kanobhutshuzwayo amakhulu akuleli, i-Orlando Pirates neKaizer Chiefs, ukulwa nokusabalala kwegciwane iCovid-19.
La makilabhu, ngokubambisana nenkampani iMultiChoice, abambe isigcawu sabezindaba lapho ememezele khona ngomnikelo wezimpahla zokuvikela kulabo abenza umsebenzi wezempilo nokuvikela umphakathi okubalwa kubona odokotela, abahlengikazi, amaphoyisa namasosha.
Kulezi zimpahla kubalwa izifonyo zokuvala ubuso, amagilavu nokunye.
Ngaphandle kwalezi zimpahla zokuvikela, kuphinde kwamenyezelwa neqhaza elizobanjwa ngabadlali bala makilabhu ekusabalaliseni umyalezo ngobumqoka bokugonqa ezindlini emphakathini wakuleli.
Abadlali kumenyezelwe ukuthi bazosebenzisa izinkundla zabo zokuxhumana ukusabalalisa
umyalezo wokukhuthaza umphakathi ukuthi uhlale emakhaya ngalesi sikhathi izwe lisavaliwe ngaphansi kwezinsuku ezamenyezelwa nguMengameli Cyril Ramaphosa.
Ekhuluma kulesi sigcawu uMnu Imitiaz Patel onguSihlalo wakwaMultiChoice, uthe bakhethe ukwenza lolu xhaso ngalezi zimpahla ngenxa yomsebenzi omqoka owenziwa yilabo abasebenza ukuvikela umphakathi ngalesi sikhathi.
Uthe kubalulekile ukuthi lezi zisebenzi zihlale zivikelekile ukuqinisekisa ukuphepha komphakathi nemindeni yabo.
Uqhube ngokuthi beyiMultiChoice kakulona uxhaso lokuqala lolu njengoba nasemkhakheni wezokuqopha imidlalo kamabonakude bekwazi ukunikela ngo-R80 million ukusiza lezi zinkampani zikwazi ukuholela abalingisi nabakhiqizi ngalesi sikhathi ukuqopha kusamile.
UMnu Irvin Khoza, onguSihlalo wePirates, uthe ukuba yizimbangi kwala makilabhu kuphela enkundleni kanti ngaphandle kwayo ashumayela ihubo lobumbano.
Uthe kakuqali ukuthi la makilabhu ahlangane uma kunesidingo sokusiza umphakathi njengoba kumele kube yiwo ahamba pha-mbili ngaso sonke isikhathi.
Ubonge uhulumeni waseNingizimu Afrika noDkt Zweli Mkhize onguNgqongqoshe wezeMpilo ngokuhamba phambili ukuqinisekisa ukuthi kulwiwa nxazonke naleli gciwane elibhubhisayo
UMnu Kaizer Motaung, onguSihlalo weChiefs, uthe abadlali yibona abazoba yizwi lokugqugquzela umphakathi ukuze leli gciwane lisheshe linqotshwe.
UDkt Mkhize ubonge ubudlelwano bokuhlanganyela kula makilabhu ebhola nenkampani iMultiChoice ngenhloso yokuphosa esivivaneni esikhathini esinzima.
UDkt Mkhize uthe leli gciwane kalidingi labo abasebenza ngezempilo nezokuvikela kuphela, kodwa lidinga wonke umphakathi ukuthi ube yingxenye yokulwa nalo.
Babalelwa ku-2506 abantu base-Ningizimu Afrika abahaqwe yileli gciwane kanti bangu-34 asebedlulile emhlabeni.
Previous articleAbendabuko baxegiselwe oweCovid-19
Next articleucathanyelwa eyasegoli owe-arrows